ညီလင်းသစ်: ခရီးသွားရန် ရှိသည်...
Posted by ညီလင်းသစ် au 20.4.11
နှဲသံကြီးထွက်လာရင် “ အောင်မြတ်လေး အယ်လေ အောင်မလေး အစ်ကိုရဲ့ ဆိုပြီး ” လိုက်ကော ငိုရမှာလားဗျး)
ခရီးတိုးလေးမှာမိသားစုတွေ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။ ဓာတ်ပုံကောင်းတွေလည်း မျှော်နေပါအုံးမယ် ။
ပြန်လာရင် ပြန်ဆုံတာပေါ့ကွယ် :)
ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ပဲ လို့ ထင်မိပါတယ်။
I can't wait to see the snapshots and read the posts regarding this short trip. Bon Voyage!!!!
Haveagood trip with your beloveds.
ခရီးသွားမယ့်ရက်တွေအားလုံး ရာသီဥတု သာသာယာယာ ရှိပါစေ ...
မိသားစုနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် တယောက်တည်းဘဲဖြစ်ဖြစ် ( အားကျတယ် မနာလိုဘူး :D ကိုယ်တွေကတော့ ဒီရက်ပိုင်း ခလေးစာမေးပွဲရှိလို့ ခလေးနဲ့အတူ စာလိုက်ဖတ်ရဦးမယ် )
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နဲ့ လုပ်ချင်တာတွေအားလုံး အဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေ ...
စတီးရွိုက်ဆေးပြားကိုငုံ၊ မီတာ ၁၀၀ ကို ၄ စက္ကန့်နဲ့ ပြေးနေတဲ့ကိုညီလင်းရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကြည့်ချင်တယ် :P
ခွင့်ရက်တွေ ၁ ပတ်လောက်ရတာ ပျော်စရာကြီး။ မိသားစုနဲ့ အတူတကွပျော်ရွှင်သော အားလပ်ရက်လေးဖြစ်ပါစေ အကိုရေ .....
ဟားဟားဟား... ညီကလည်း နောက်တတ်တာပဲ၊ ကျေးဇူးပါပဲဗျာ၊
သိပ်သေချာတာပေါ့ဗျာ၊ ရန်ကုန်မှာပြန်ဆုံ...အဲ.. ပြန်လာရင် ပြန်ဆုံကြတာပေါ့၊း)
တစ်ယောက်တည်းသွားမယ့် နေရာတွေက ဓါတ်ပုံ ရိုက်ဖို့ပါပဲဗျာ၊ အေးအေးဆေးဆေး အချိန်ယူ ရိုက်ချင်လို့..၊
ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်ဗျာ၊ ပို့စ်နဲ့ ပုံတွေလည်း တင်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်၊
ကလေးနဲ့ စာလိုက်ဖတ်ရတာလည်း ပျော်ဖို့ ကောင်းပါတယ်ဗျ၊ သူတို့ရဲ့ တိုးတက်မှုလေးတွေကို ကြည့်ရတာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်၊း) ဆုတောင်းပေးလို့ ကျေးဇူးပါနော်..။
ဟားဟား... ဒါဆိုရင်တော့ Forrest Gump လို မနားတမ်း ပြေးမှပဲ တူတယ်၊ ကျေးဇူးပါ ညီမရေ....။း)
ခရီးစဉ်နှစ်ခုလုံးအဆင်ပြေပါစေ။ ရာသီဥတုကောင်းပါစေ။ ပုံတွေအများကြီးတင်နိုင်ပါစေ။
ပျော်ရွင်စရာ မိသားစုခရီးစဉ်လေး ဖြစ်ပါစေအကိုရေ
ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ ခရီးသွား အတွေ့အကြုံလေးတွေ
စိတ်ဝင်စားစရာတွေ လာအုံးမယ် မျှော်..ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ ခွင့်တွေရကြ သွားကြတဲ့အသံကြားရရင် ကိုယ်ပါရောယောင် လိုက်ပျော်လာတယ်ဗျာ။ အောင်မြင်သော အဆင်ပြေချောမွေ့သော ခရီးဖြစ်ပါစေ။
( အရင် ဝေး.. စိတ်ဖြေ ကပျက်သွားပြီဗျ။ အသစ်လုပ်ထားပါတယ်။)
I went up to zermatt-Matterhorn with my family yesterday.The weather was fine and clear the whole day luckly.I remember my friends especially blogger photographers cos of rare and amazing scenes.
Hope You also have lovely trip.Longing for nice photoes and post:)
Haveanice trip with your family.Best wishes for every happiness life can bring.
ဒီမှာ ၅လပိုင်းလဆန်းက ဂိုးလ်ဒင်းဝိခ် ပိတ်ရက်ပါ။
ကိုညီလင်းသစ်ရဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို မျှော်နေပါတယ်။
စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ရေး နှင့် ခွန်အားသစ်တိုးဆေးပြား ထုတ်လုပ်ရေး
အဘ ရေ....ဗမာဇတ်ကားထုံးစံအတိုင်း..မသေခင် စကားတွေတဝကြီးပြောပြီး..ကင်မရာနဲ့ မှန်ဘီလူး ကို သားသားကို အမွေပေးတဲ့အကြောင်း..ဇတ်ညွှန်းထဲ ထည့်ရေးပေးပါနော်...
ပျော်ရွှင်သော ခရီးလေးဖြစ်ပါစေ အစ်ကိုရေ.. posts တွေ မျှော်နေတယ်နော် :-)